Basikety – Coupe du Président : ekipa 13 ho an’ny “Zone Centre”, 9 ho an’ny “Zone Nord” | NewsMada
Basikety – Coupe du Président : ekipa 13 ho an’ny “Zone Centre”, 9 ho an’ny “Zone Nord”
Raikitra. Miditra amin’ny andiany faharoa ny fiadiana ny « Coupe du Président » eo amin’ny taranja basikety, karakarain’ny federasiona malagasy (FMBB) miaraka amin’ny fiadidiana ny Repoblika. Araka izany, hanomboka anio 6 febroary hatramin’ny 14 febroary izao ny fifanintsanana amin’ireo Zone Nord, any Antsiranana, sy Zone Centre, any Toamasina, raha ny 13 – 21 febroary kosa ho an’ny Zone Ouest, any Tsiroanomandidy, sy Zone Sud, any Fianarantsoa.
Raha ny vaovao, tsy nahafeno 16 avy ireo Zones roa mampiantrano ny fifanintsanana ireo. Ekipa 13 ho an’ny Zone Centre, misy an’Atsinanana, Analamanga, Alaotra Mangoro ary Analanjirofo, raha 9 kosa ho an’ny Zone Nord, misy an’i Diana, Sava ary Boeny sy Sofia. Tsy nahatonga solontena kosa ity faritra farany.
Na izany aza, hiady tanteraka ny fihaonana amin’ity andiany faharoa amin’ny « Coupe du Président » ity. Samy tsy hisy hanaiky lembenana ireo ekipa mpandray anjara amin’izany. Ireo ekipa roa voalohany isaky ny Zones kosa, miantrika ny “Play-off” miaraka amin’ireo ekipa mitana ny laharana fahadimy hatramin’ny fahavalo teo amin’ny sokajy N1A lehilahy, taona 2015, mialoha ny famaranana lehibe eto Antananarivo.